नेपालका नेता कति फुर्सदिला, गिती एल्वमको विमोचनमा गृहमन्त्री, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
HOME » नेपालका नेता कति फुर्सदिला, गिती एल्वमको विमोचनमा गृहमन्त्री
नेपालका नेता कति फुर्सदिला, गिती एल्वमको विमोचनमा गृहमन्त्री
काठमाडौं। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)ले पदभार ग्रहण गरेपछि मन्त्रालयमा प्रहरी र गृहका अधिकारीलाई ब्रिफिङ गर्दै भनेका थिए, ‘कुरा धरै भए, अब कुरा होइन काम गर्ने हो। त्यसको नेतृत्व मैले गरेको छु। गुटगत रूपमा नलागेर मलाइ सहयोग गर्नुहोस् नेपाल प्रहरीलाई संसारकै नमूना बनाउनेछु।’
तर, नेपाल प्रहरीलाई संसारकै नमूना बनाउने त परै जाओस नेपाल प्रहरीले बनाएको ईमेज पनि खस्किँदै गएको छ। ४ महिना बितिसक्दा पनि बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तका हत्यारालाई प्रहरीले पत्ता लगाउन सकेको छैन। मानिसहरु प्रहरीले नै घटनाको प्रमाण मेटाएको आरोप लगाइरहेका छन् ।
यस्तोमा गृहमन्त्री थापा भने संगठनलाई विश्वसनीय बनाउनुको साटो सानातिना कार्यक्रममा रमाइरहेका छन्। गत सोमबार उनी काठमाडौंको र्याडिसन होटेलमा गिती एल्बम ‘महक २’को विमोचन समारोहमा भेटिए। उनीमाथि नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा दिन नसकेको आरोप लागिहेका बेला आफूसँग सम्बन्धित नभएका यस्ता कार्यक्रममा समय खेर फाल्नु कति उचित होरु देशमा हत्या, हिंसा र बलात्कार जस्ता घटना बढिरहेका बेला गृहमन्त्री थापा यस्ता कार्यक्रममा सरिक भइरहे आम मानिसले कसरी सुरक्षाको महशुस गर्न सक्छन्रु
नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा दिन नसकेको आरोप लागिहेका बेला आफूसँग सम्बन्धित नभएका यस्ता कार्यक्रममा समय खेर फाल्नु कति उचित होरु
गायक प्रल्हाद तिमिल्सिनाको स्वरमा रेकर्ड भएका आधुनिक शैलीका गीतहरुको दोस्रो एकल एल्बम ‘महक–२’ हो। कार्यक्रममा गृहमन्त्री थापासँगै संगीतकार शम्भुजीत बासकोटा, आलोकश्री, गीतकारहरु राजेन्द्र थापा, डा।कृष्णहरी बराल तथा एसपी कोइराला उपस्थित थिए । विमोचित ‘महक–२’ एल्बममा १० वटा गीत समावेश छन् ।
एल्बमका गीतहरुमा वरिष्ठ संगीतकार शम्भुजीत बास्कोटा, सुरेश अधिकारी, आलोकश्री, न्ह्यू बज्राचार्य, महेश खड्का, वसन्त सापकोटा, विकास चौधरी तथा आशिष अविरलद्वारा संगीतबद्ध गीतहरु समावेश गरिएका छन् । गायक तिमिल्सिनाले गाएका चलचित्रका गीतहरुमध्ये गाला रातै गाला रातै, फिगर कोकाकोला, बट स्लोली स्लोली, कहिले माया स्याड फेस, पिरो पिरोलगायतका लोकप्रिय मानिन्छन्।
समारोहमा गायक तिमिल्सिनाले एल्बमका दुई गीत गाएर सुनाएका थिए भने तीनवटा गीतका म्युजिक भिडियोहरु प्रिमियर गरिएको थियो । ती मध्ये ‘थोत्रो रेडियो’ शीर्षकको गीत यूट्युबमासमेत उपलब्ध भैसकेको छ।